Colorado WIC SOMALI | JPMA, Inc.
Tani tan ku eeg Ingiriis
Cidda la Hadlayo
Soo wac u fidiyay hay'adda WIC haddii…
Wixii su'aal ah ka weydii cuntada ama WIC.
Waxaad ka heshay cuntooyin aad u baahan tahay inaad WIC ka hesho.
Kaarkaaga waa lumay, la xaday, ama waxyeelo soo gaadhay.
Soo wac qadka taleefanka tooska ah 1-844-234-4950 haddii…
Waa inaad dib-u-cusbooneysiiso ama baddashaa PIN-ka.
Maxaan samaynayaa haddii kaadhadhka ama xayeysiin?
Waxaad bedeleysaa PIN ka hor, ka dibna waxaad soo wici kartaa barnaamijka WIC ee degaanka! Kadibna waanu joojineynaa cid kasta oo dooneysa in aad u isticmaasho rashinka raashinka iyo inaad ka caawiso sidii aad u heli lahayd kaadh cusub.
Ka waran haddii kaarkeyga aan shaqeynayn?
Ku soo wac lambarka bilaash ee ku yaala kaarkaaga ama barnaamijka deegaanka ee WIC.
Goorma miyuu helayaa lacag cusub?
Gunnooyinka cuntooyinka ee waqtigan xaadirka ah waxay ka rarayaan xafiiska WIC ee isla markiiba. Dhamaan raashinka raashinka ee bilaha soo socda waxaa lagu shubi doonaa ka dibna waxaad ku qori doontaa taariikhda ay ku qoran tahay taariikhda dhammaadka.
Maxaad ku samaynaysaa kaadhkayga markaad isticmaalayso gunnadayda?
KAYDSO KAADHKAAGA eWIC! Xataa markaad wada iibsato dhamaan cuntooyinka WIC, kaadhkaaga dib ayaa loo isticmaali karaa. Kusoo dhejinta kuxiran ee aad ku iibsan karto kaadhka eWIC.
Waxyaabaha ay noqonayaan ma aha haddii aanan iibsan karin wax aanan rabin in qof kale iibiyo?
Qof kale ayaa ku iibin kara haddii uu doonayo. Waxaad u baahan tahay inaad kaarto eWIC iyo PIN-kaaga. Waa inaad xaqiijisaa inuu yahay qof aad ku kalsoon tahay!
Maxaa dhacaya haddii aanan iibsan dhammaan cuntooyinka WIC? Gunnnadaani ma ma waxay u wareegayaan bisha dambe?
Maya, wixii lacag ah ee aanad isticmaalin waxa
Halkee Laga Iibsan Enfamil
Waxaad u baahan tahay inaad xisaabiso dhowr xisbi:
Waxaad isticmaali kartaa ikhtiyaarkaaga "Faa'iidooyinkayga" ee aad ka heli karto app-ka ka WICShopper si aad u aragto gunnooyinkaaga wakhtigan.
Waxaad fiirisaa risiidhkaaga tukaanka ugu dambeeyay.
La kulan qasnajiga tukaanka booshariga ama leh Xafiiska Adeegga Macmiilka si aad uugu soo dirto bogigaaga waqtiga.
Ku soo wac lambarka bilaash ah ee ku yaala kaarka eWIC si aad u ogaato baaqigaaga.
Booqo www.ebtedge.com si aad u aragto oo aad u daabacato baaqigaaga.
Ku Isticmaal Kaarkaaga eWIC
Ku iibso waxa aad doonayso. Khasab ma aha inaad dhammaan cuntada mar uun wada iibsadaan!
Waad kaarkaasi ku darsataa markaad baxayso.
Waxaad ka soo iibsan kartaa eWIC markaad bilawdo iibinta.
Geli PIN-kaaga oo riix badhanka soo galaya shaashadda.
Khasnajiga ayaa cuntada iska leh.
Xaddaan lacageed ee shayada cuntada iyo xaddaan lacageed ee khudradda cagaaran iyo khudradda aad ka iibsaneyso waxaa laga yaabaa in xisaabta WIC.
Khasnajiga waxay ku siin doontaa risiidh si aad u muujiso gunnooyinkaaga iyo taariikhda aad ku leedahay gunnadaadu.
Waa inaad ka hor inta aadan ku iibin eWIC.
Baqiga aad ku nooshahay waa inaad bixisaa lacag caddaan ah, EBT, SNAP ama nooc kale oo lacag ah oo aad bixineyso.
Waa maxay PIN (Lambarka Aqoonsiga Shakhsiyeed (lambarka Aqoonsiga Shakhsi)?
PIN-ku waa afar lambar sir ah, oo kaadhadhka la socota, kaas oo kuu sahlaya inaad ku hesho gunnada WIC. Markaad doorato PIN, waxaad doorataa afar lambar oo fudud oo aad ku xasuusato, laakiin waa adag tahay in qof kale garto (tusaale, taariikhda dhalashada waalidka ama taariikhda dhalashada ilmahaaga).
HA ku dul qorin PIN-kaaga kaadhka dushiisa.
HA si kastaba ha ahaatee PIN-kaaga aanad doonaynin inaad kaadhadh isticmaasho. Haddii qofku ogaado PIN-kaaga oo isticmaalaya kaadhkaaga si aad u isticmaasho lacagaha cuntada lagu siiyo oo aanad u ogolaan doonin markaad rabto inaad iibsato.
Sidee bay wax u dhacayaan haddii aan ka tago PIN-kayga ama aan rabo inaan baddalo?
Waxaad kala xiriiri kartaa PIN-kaaga dhowr dariiqo:
Booqo xisaabtaada onlaynka www.ebtedge.com.
Ku soo wac lambarka bilaash ah ee ku yaal dhabarka kaadhka eWIC.
Maxaa dhacaya haddii aan PIN khaldan geliyo?
HA maalin walbaa inaad ku kalsoon tahay PIN-kaaga. Haddii PIN-ka aad gashan tahay oo aad afar jeer isku daydo, PIN-kaaga waa la xidhayaa. Tani waa loo qabtaa si looga hortago qof ku takhasusay PIN-kaaga oo qaata gunnada cuntada. Si aad u furto kaadhkaaga waa inaad ka heshaa illaa aad ka soo saarto khariidadda.
SNAP iyo FDPIR ama xarumaha degmooyinka, iyo dadka helaya, waa inay muujiyaan soo-sheegashada Tilmaor la’aanta soo socota:
Qaanuunka guud ee madaxweynaha iyo kan dowladda. US Beeraha (USDA) shuruucda u dejinaysa qaanuunka iyo shuruucda, USDA, Wakaaladaheeda, xafiisyada, iyo shaqaalaha, iyo ka qeyb galayaasha barnaamijka ama maamulayaasha barnaamijyada USDA waa mamnuuc in aad ka hortagto wax ku saleysan isirka. midabka, asalka wadaka, galmada, caqiidada aamminka, naafanimada, dhagaysiga, xurgufta siyaasadeed, ka aarsiga ama aargoosiga xuquuqul insaanka barnaamijyada ama hawlihii shaqo ama xaraashka ama maalgelisay USDA.
Dadka naafada ahi waxay u baahan yihiin qaab kale oo wada-xiriir la leh xog wari (tusaale, Farta qoraalka indhoolaha, daabacaad weyn, maqal cajiib ah, Luqadda Dhegoolaha ee Waddanka, iwm), waa mid ka soo baxda xididdada gobollada (Gobol ama degmo) ​​halka ay ku sugan yihiin ka soo codsadeen dheefaha. Dhegeystayaasha, maqalku waxay ku adagyahay ama ka maqlaan hadalka oo ah kan xiriiriyaha la wadaagi karo awood USDA waa gaarsiinta ururrada dadka Nafada ah (800) 877-8339. Intaas waxaa sii dheer, macluumaadka loo baahan yahay ayaa lagu heli karaa luqaddo kale.
Si loo gubiyo cabashada takoor Xidigaha, buuxi foomka Cabashada Takoorka ee barnaamijyada UDSA, (AD-3027) oo laga soo aruuriyey:
Sidee loo Diiwaangeliyaa Cabashada, iyo xafiis kasta oo ka tirsan USDA, ama warqad warqad ku xigta USDA oo ay ku qoran tahay warqado dagaal lagu sifeeyo dhamaan macluumaadka lagu siinayo shaqsiga foomka. si aad u codsato nuqul nooc ka mid ah cabashada, soo wac (866) 632-9992. U soo gudbi foomkaaga ayaa la buuxiyay ama laga dheereeyay dagaalka USDA addoo adeegsanaya:
(1) boosta: Ubax. Xafiiska kaaliyaha Xoghayaha Xoghayaha Xuquuqda Madaniga 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410;
(2) fakis: (202) 690-7442; ama
Haydani waa adeeg bixiyaha fursadda loo simanyahay
Waxaa sameeyay JPMA, Inc. | Xuquuqda daabacaadda 2012 - 2021 | Dhamaan xuquuqaha ayaa ilaaliya